Yenza iAdobe Flash isebenze kuGoogle Chrome | Iindaba zeGajethi
Uyenza njani iplagi eflash kwiGoogle Chrome
Kwiindaba zakutshanje kwiwebhu, igama elithi "iqela lokungena" liye lavakala ngeziganeko ezinkulu, into ethi ngandlela thile ibe yinkxalabo yabantu abaninzi kuba Umsebenzi weli qela labagculeli, ibiya kuthi ixhomekeke kwinani elithile lobungozi kwinkqubo nganye yokusebenza.
Abanye bacinga ukuba iplagi yeAdobe Flash Player sesinye sezizathu ezibangela olu hlobo lokuba sesichengeni, neso sizathu sokuba iMozilla kutsha nje ithathe isigqibo sokuvimba naluphi na uhlobo lomsebenzi ngaphakathi kwisikhangeli sayo seFirefox. Ngoku, kunokuba ngomzuzwana othile ufuna le iplagi kwiGoogle Chrome, kufuneka ulandele amanyathelo ambalwa ukuze ube nakho vumela kuphela phantsi kweemeko zakho kunye neemvume ezifanelekileyo.
Uyenza njani iAdobe Flash Player kwiGoogle Chrome?
Emva koko siza kubeka umfanekiso-skrini omncinci, oya kuba ngulowo kuya kufuneka ufike kuwo. Njengoko ubona, kukho ukhetho olwenziweyo apho indawo yeeplagi zikaGoogle Chrome (izongezo) izakubuza umsebenzisi ukuba uyafuna na ukuwuvumela umsebenzi yale iplagi (Adobe Flash Player).
Vula isikhangeli sakho seGoogle Chrome.
Yiya ngasekunene (i-hamburger icon) kwaye ukhethe «ukuseta«.
Skrolela ezantsi kwaye ukhethe iqhosha elithi «Bonisa iinketho eziphambili«.
Ngoku fumana indawo ye «Ubumfihlo»Kwaye emva koko ucofe kwi« Useto loMxholo ».
Ukusuka kwiwindow entsha, khangela indawo ye «Izinto ezenziwayo«.
Ukuba ulandele ngalinye lala manyathelo emva koko uya kuzifumana ukwicandelo elifanayo elibonisa umfanekiso-skrini esiwubeke ngaphambili. Kuya kufuneka uvale iwindow kwaye ulinde ukubona ukuba kwenzeka ntoni xa uhlobo oluthile lwesixhobo, usetyenziso lwe-Intanethi okanye Iwebhusayithi ikukhuthaza ukuba usebenzise iAdobe Flash Player. Ukusukela ngoku ukuya phambili, ngumsebenzisi oya kuthi athathe uxanduva lokusebenzisa ukusebenza, okuya kuxhomekeka kwisidingo ngasinye esivela ngexesha elinikiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyenza njani iplagi eflash kwiGoogle Chrome
Ayisebenzi, ndiyaqhubeka nokufumana umyalezo wokufaka kunye nokwenza ukuba i-Adobe isebenze njengangaphambili ...
UGloria Suarez sitsho
Kuba abaniki mpendulo ithile kwaye ndingathanda ukwazi ukuba kutheni uGoogle Chome engasebenzi ngokuchanekileyo kwaye zininzi iimpazamo kwaye yintoni eyenza ikhompyuter yam icothe kakhulu kwaye ngalo mzuzu uGoogle Chome wayeka ukusebenza ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho kwaye Inkxaso yezobugcisa ENKOSI KAKHULU.
Phendula u-gloria suarez
Ndibhala chrome: // plugins kwaye iyaphuma ukuba ikhubazekile ayiyivuli le crap
Uhlaziyo lwamva nje lweChannel lususile ukufikelela kwiiplagi, elo candelo alisafumaneki.
UJose Ibarra sitsho
Ukucwangciswa komxholo kwaye emva koko kudanyaza iisayithi zisebenzele mna.
Phendula kuJose Ibarra
UCarmen Rosa Lujan Pacheco sitsho
Enkosi Jose, beka nje idilesi kwaye iyasebenza
Phendula Carmen Rosa Lujan Pacheco
Mholo. Ndifikelele kuseto lomxholo, kodwa kwiFlash andiboni khetho lokongeza naliphi na iphepha. Nokuba iphawuliwe yibuze kuqala okanye ibhlokhi.
Ezi zezinye zezona zixhobo eziphambili ze-Android
Uphengululo lweZTE Spro2: Iprojektha ephathekayo, enamandla kunye nexabiso eliphantsi